Yekufambisa Fever 2 Inowana Kuwedzeredzwa Nekuvandudzwa - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | May 12, 2022 | nhau, Vhidhiyo mitambo
Akanaka Mufudzi Varaidzo uye situdiyo yekusimudzira Urban Games yakaburitsa hombe yemutambo mutsva weTransport Fever 2 iyo yakawedzera mamwe marongero ekugadzirisa mutambo, yakagadziridzwa mitsara yekudzora uye nani manejimendi emotokari.
Nekuwedzera uku kurongeka, timu yekusimudzira iri kuvandudza ruzivo rwemutambo wemitambo uye inotarisira kuona kuti nharaunda inowedzera sei kubva muTrans Fever 2.
Transport Fever 2 yakatanga kuburitswa muna Zvita 2019 uye yatokwezva vatambi vanosvika hafu yemiriyoni kubva pasirese. Izvi zvinoita kuti ive inonyanya kufarirwa Mitambo yeUrban kutanga kusvika parizvino. Iyo yakagadziridzwa huwandu hwemabasa, iyo yakagadziridzwa mushandisi interface uye yakakura modding sarudzo dzinobatsira kuzadzisa zvese zvinangwa zvawakazvimisira iwe nenzira yakanakisa.
Transport Fever 2 inopa anopfuura zana nemakumi manomwe emakore echokwadi tekinoroji uye nhoroondo kuvaka uye kugona yako yekufambisa empire. Ipa pasirese nezvezvifambiso zvainoda uye ita hupfumi nemasevhisi ekufambisa akasarudzika. Rega zvitima zviumburuke panjanji, mabhazi nemarori zvikotamire mumigwagwa, zvikepe zvinyurure mumvura uye ndege dzichibhururuka mudenga. Kutakura vanhu kuenda kubasa kana kutamba, kuita kuti maguta akure uye abudirire, uye kuendesa zvinhu nemidziyo kuti hupfumi hwenyika hurambe huchibudirira. Tenzi matambudziko makuru ekugadzirisa zvinhu kubva 170 kusvika nhasi uye kuvaka humambo hwekufambisa huri hwechipiri kune husina!
Mutambo wemahara unopa akawanda dhizaini sarudzo uye mumushandirapamwe modhi unogona kunge uripo padhuze kana nhoroondo yekufambisa ichinyorwa mumakondinendi matatu. Transport Fever inopa anopfuura mazana maviri akadzama akafananidzirwa emotokari kubva kuEurope, America neAsia pamwe chete neyechokwadi traffic uye hupfumi simulation. Nerubatsiro rwemu-mutambo mepu mupepeti, nzvimbo dziri munzvimbo nhatu dzakasiyana dzemamiriro ekunze dzinogona kuenzanisirwa pamadiro uye nerutsigiro rwakakura rwemodding runotenderedza kunakidzwa kwemutambo.
Urban Games inopa nzwisiso yezvinyowani zvekuvandudza muvhidhiyo iyi:
Kutakura Fever 2 * 40,01 EUR tenga
Kare Mattel anotangisa Barbie nechiyamuro chekunzwa
Inotevera Zvakaipa Zvakafa: Kuburitswa kwemutambo wechiito wakavakirwa pamafirimu echitendero
Assassin's Creed Valhalla: Ubisoft inogutsikana nenhamba dzekutengesa
Mattel: Scrabble uye Uno muFC Bayern tarisa
Iyo Yakavanzika Palace iri kuburitsa anopfuura mazana manomwe ePS700 prototypes uye demos